နီဇူလိုင်: October 2012
ရူးချင်ယောင် ဆောင်မနေနဲ့ 
“ ရူးချင်ယောင်ဆောင်မနေနဲ့ ”
+++ရူးချင်ယောင် ဆောင်မနေနဲ့+++ရူးချင်ယောင် ဆောင်မနေနဲ့ +++
ခုခေတ် သီချင်းတပုဒ်ရဲ့  ရေပန်းစား နေတဲ့စာသားလေးပါ..။ခုခေတ် လူငယ်တွေ ကြား ထဲမှာလဲ ဒီဝေါဟာရ
အသုံးကလေးက တော်တော် တွင်ကျယ်သား…။လူတယောက်ယောက်က အခွင့် အရေးတခုခုကို ရယူနိုင်ဖို့ 
နည်းမှန်လမ်းမှန် ရိုးရိုးသားသား မကြိုးစားပဲ..ရူးသလိုလို သွပ်သလိုလို..အရူးပါးစတိုင် နဲ့အချောင်ကြိုးစား
တတ်သူတွေကို.”ဟေ့ ကောင်..ရူးချင်ယောင် ဆောင်မနေနဲ့ ..”လို့ နှိမ့် ချ ပြောဆိုတတ်တယ်..။ဒါမှ မဟုတ်
ကိုယ်တာဝန်ယူရမယ့်ကိစ္စမျိုးကို တာဝန်မယူချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို မသိသလို လုပ်နေရင်လဲ “ဒီကောင်..ရူးချင်ယောင် ဆောင်နေတယ်..”လို့ပြောတတ်ကြတယ်..။ပြောကြဆိုကြတဲ့လေသံတွေကို ကြည့်ရင်ကို ရူးချင်ယောင်ဆောင်တယ်..ဆိုတာ ကောင်းတဲ့အပြုအမူ မဟုတ်မှန်းသိသာထင်ရှားနေပါတယ်။
တကယ်တော့ ခပ်ရိုင်းရိုင်းစကားလုံးနဲ့အရူးလို့အခေါ်ခံရတတ်တဲ့တကယ်စိတ်မနှံ့ သူတွေကို လူအများက တော်ရုံတန်ရုံ ဗွေ မယူ..ကြ။ခွင့် လွှတ်ထားတတ်ကြတယ်။ဒါကို အခွင့် ကောင်းယူပြီး.တဖက်
သားရဲ့စာနာထောက်ထားမှုကို အလွဲသုံးစား လုပ်ကာ ရူးချင်သွပ်ချင်ယောင် ဆောင်ပြီး ကိုယ့်လိုဘ ပြည့် ဖို့ကြိုးစားရယူတတ်သူတွေကို လူတော်တော်များများက ရွံရှာကြ ပါတယ်။ဘယ်သူမှလည်း အထင်ကြီးတန်ဖိုး
ထားကြမယ် မထင်ပါ..။တနည်းအားဖြင့်ဟန်ဆောင်တယ်.. ဆိုခြင်းဟာ …လိမ်လည်ခြင်း တမျိုးပါပဲ..။
ကိုယ်အလိုရှိရာ တခုခုကို ရဖို့ ဟန်ဆောင်ကြိုးစားပြီး ရလာတဲ့အရာကကော..အမှန်စင်စစ် တန်ဖိုးရှိ နိုင်ပါ့ မလား..။
ဒါပေမယ့် ခုတလော..ရူးချင်ဟန်ဆောင်သူတွေ များလာ လို့ လားမသိ..။ရူးချင်ယောင်
ဆောင်မနေနဲ့.” ဆိုတဲ့စကားလုံးက လူထုကြားမှာ ရေပန်းစားလာတဲ့ဝေါဟာရ တခုဖြစ်လာနေတယ်..။. လူငယ်တွေကြားမှာ ရူးချင်ယောင်ဆောင်မနေနဲ့ ..လို့ရှုံ့ ချသံ တွေ ကြားလာရတယ်..။ဘာဖြစ်လို့  ရူးချင်
ယောင်ဆောင်သူတွေ ပေါများ လာရသလဲ..။လူတွေရဲ့ ပင်ကို သဘောအရလား..။ပတ်ဝန်းကျင်..ခေတ်စနစ် ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေ ကြောင့် လား..။
တလောက ရန်ကုန်ရောက်တုံး ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့ နံမယ်ကြီးကျောင်းတကျောင်းမှာ ပညာသင်
ကြားနေတဲ့ငါးတန်းကျောင်းသူ တူမကလေး ရဲ့စာကျက်သံကို ကြားလိုက်တော့ အလန့် တကြားဖြစ်သွားမိ
တယ်..။သူကျက်နေတဲ့စာက ငါးတန်းမြန်မာဖတ်စာထဲ မှာပါတဲ့ကဗျာသင်ခန်းစာ တခုပါ။
“ပညာလိုသော်” ဆိုတဲ့ကဗျာ တပုဒ်ရဲ့ဆက်စပ်အမေးအဖြေ တွေကို ကျက်နေတာပါ..။
မေးခွန်း(၃)။ ။ ပညာရှိထံသို့မည်သို့ချဉ်းကပ်ရမည် နည်း။
အဖြေ(၃)။ ။ ပညာရှိထံသို့ရူးသွပ်ချင်ဟန်ဆောင်ရွေ့အခါအခွင့် ကို ချောင်းမြောင်းကာ အနီးကပ်ဝင် ရောက်ရွေ့  ပညာသင်ယူရပါမည်..။
ကြားရချက် က နားထဲမှာ ခိုးလိုးခုလု ဖြစ်သွားတော့.. “ သမီး စာက အဆန်းပါလား..။ပညာရှာ.ပမာသူဖုန်းစား
ဆိုတာထက်တောင် ဆိုးနေပါလား..။” လို့ပြောမိတယ်..။သမီးလေးက ခေါင်းကလေးကို ကုပ်ရင်း..
“သမီးလဲ ဆရာမသင်လို့ သာကျက်နေရတာ..။ဘာကြီးမှန်းလဲ မသိဘူး။ပညာရှာ ပမာသူဖုန်းစားဆိုတာကကော ဘာလဲဟင်” လို့မျက်မှောင်ကလေးကုပ်ရင်း
“ ဟိုးရှေးရှေး တွေတုံးက ပညာရှိကြီးတွေက ပညာတွေကို လျှို့ ဝှက်ထားတတ်တော့ ပညာလို
ချင်သူတွေက သူဖုန်းစားလို..တောင်းပန်ခယပြီး သင်ကြရတယ်..။ခုခေတ်လို ပညာရွာခေတ်ကြီးမှာ ပညာတွေ
ကို လျှို့ ဝှက်ထားလို့မရတော့ဘူး..။ပညာရပ်တခုခု ကို ရရင်ချက်ချင်း ဖြန့် ဝေနေကြတဲ့ခေတ်ကြီးကို ရောက်နေပြီ..။ဒီလို ခေတ်ကြီးမှာ ပညာရှာပမာသူဖုန်းစားဆိုတာ တောင် ခေတ်မမီတော့ တဲ့အတွေးအခေါ်
တရပ် ဖြစ်နေပြီ။အခု ကဗျာထဲကလို ပညာလိုလို့ရူးချင်သွပ်ချင်ယောင် ဆောင်ပြီး ချဉ်းကပ်ရမယ်..ဆိုတဲ့ 
နည်းနာ တွေက ပိုတောင် ဒိတ်အောက်နေပြီ..” လို့ရှင်းပြမိတယ်.။ ပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားတာနဲ့သူ့ မြန်မာစာဖတ်စာနဲ့လေ့ကျင့် ခန်းစာအုပ်ကလေးတွေကို ယူကြည့်မိပါတယ်..။့
ပဉ္စမတန်း မြန်မာဖတ်စာရဲ့  စာမျက်နှာ(၂၅)မှာ “ ပညာလိုသော်” ဆိုတဲ့ကဗျာကို တွေ့ ပါတယ်..။
ချစ်သသူကို ဥစ္စာ မငှားရ ။ ။တဲ့ ..။
ကဗျာအောက်ခြေမှာ ကဗျာရေးသူ စာဆိုအမည် မပါပါ..။ကျမတို့ငယ်ငယ်က သင်ခဲ့ ရတဲ့ကဗျာတွေ စာတွေ
မှာ စာဆိုအမည် တင်မက စာဆိုဖြတ်သန်းတဲ့ခေတ်တောင် ပါတတ်ပါတယ်..။အမည်မသိရင်တောင်.
.အမည်မသိစာဆို လို့ ပါတတ်ပါတယ်..။ဒါပေမယ့်(၁၉၈၈) အလွန်နှစ်တွေမှာ သူပုန်စာဆိုလို့ 
သတ်မှတ်ခံခဲ့ ရတဲ့မျိုးချစ်စာဆိုကြီးတွေ(ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်၊ဆရာကြီးတင်မိုး..တို့ လို)ရဲ့စာတွေ ကဗျာတွေကို ကျောင်းသုံးပြဌာန်းစာအုပ်တွေကနေ..ဖယ်ထုပ်ခဲ့ ဘူးပါတယ်..။ဘယ်လိုမှ ဖယ်မရတဲ့ကဗျာတွေဆိုရင်..ကဗျာဆရာအမည်ကို ဖျောက်ပြီး သူခိုးကျင့် သူခိုးကြံ ကြံ တဲ့ခေတ်ဆိုးကြီးရဲ့ မူအရ
ခုခေတ် ကျောင်းသုံးပြဌာန်း ကဗျာ တော်တော် များများမှာ စာဆိုအမည် မပါတော့ ပါဘူး..။အခု..ပညာလိုသော်
ကဗျာ ဟာ.. သူ့ ခေတ်သူ့ အခါ က မှန်ကန်တယ်ထင်ခဲ့ တဲ့ မသင့်တော်သော်လည်း ယာယီအောင်မြင်မှုရခဲ့ တဲ့အတွေးအခေါ်တွေ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့် မယ်..။
ကျမ စိတ်ထင်တော့ ဘယ်ခေတ် ဘယ်အခါ မှာမှ ဒီလို မရိုးသားတဲ့နည်းလမ်းမျိုးကို သုံးပြီး ပညာရှာသင့် တယ် မထင်ပါဘူး..။ ကဗျာနဲ့ အတူ..ခက်ဆစ် ဝေါဟာရ တွေပါတယ်..။အမေးအဖြေမေးခွန်းတွေ
လို့အဓိပ္ပါယ် ဖွင့် ဆိုပေးထားပါတယ်..။
“ပညာရှိထံပါးသို့ရူးသွပ်ဟန်ဆောင်ရွေ့အခါအခွင့် ချောင်းမြောင်းကာ အနီးကပ်ဝင်ရောက်ရွေ့  ပညာသင်
ယူရပါမည်။”လို့စကားပြေ ပြန်ပေးထားပါတယ်..။
ငါးတန်းကျောင်းသူလေးရဲ့ အမေ တက္ကသိုလ်ကထိက ဆရာမ..ကျမရဲ့မမကြီး ကလည်း “အေးဟယ်..ကလေးတွေကို ဘာတွေ သင်နေပါလိမ့် ။သူ အဲဒီကဗျာကို ကျက်နေတာကြားတိုင်း စိတ်မချမ်းသာဘူး” လို့စိတ်မောဟန်နဲ့ပြောပါတယ်..။
ကျမလည်း ကိုယ့် နယ်ကို ပြန်ရောက်တော့ မနေနိုင် မထိုင်နိုင်..ကျမတို့ နယ်က ငါးတန်းကလေးတွေစာအုပ်တွေ ယူကြည့်မိပါတယ်..။အကုန် တထပ်တည်းပါပဲ..။သင်တဲ့ ဆရာမတွေကို
မေးကြည့် တော့ သင်ရိုးညွှန်းတန်းအရ တပြည်လုံး ဒီသင်ရိုးအရ တညီတည်း သင်ရတယ်..လို့ ပြောပါတယ်.။
ဒါဆို တနိုင်ငံလုံးက ငါးတန်းမြန်မာစာသင်ရိုးရဲ့ပညာလိုသော် ကဗျာကို သင်ခဲ့ ဖူးသူတိုင်း ရူးချင်ယောင် ဆောင်ပြီး ပညာရှာဖို့လမ်းပြခံခဲ့ ရမှာပေါ့ ..။သွန်သင် ခံခဲ့ ရမှာပေါ့ ..။ကလေးတွေကို ဒီသင်ခန်းစာသင်ပေး တဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ဘာပါလိမ့် ..။
ပညာ(ကိုယ်လိုချင်တာ) ရဖို့မသင့် တော်တဲ နည်းလမ်းမျိုးလဲ..သုံးရမယ်လို့ ဆိုလို ထားတာလား..။
ရေဗူးပေါက်တာ မလိုချင်ဘူး..ရေပါတာပဲ လိုချင်တယ်..ဆိုတဲ့အင်မတန် ညံ့ ဖျင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်
မျိုးတွေ ရိုက်သွင်း နေချင်တာလား..။
ကျောင်းတကျောင်းက သူငယ်ချင်းဆရာမကတော့.. ကျမနဲ့စိတ်ချင်းတူနေတာကို ၀မ်းသာအားရတွေ့ လိုက်ရပါတယ်..။သူလဲ ဒီကဗျာကြီးကို မကြိုက်ဘူး..။မသင်ချင်ဘူး..တဲ့ ။
ဒီတော့ ကလေးတွေကို ကဗျာ ပုဒ်ရင်းကိုပဲ လေ့ ကျင့် ခန်းစာအုပ်ထဲမှာ ရေးခိုင်းထားလိုက်တယ်တဲ့ ..။စာမေးပွဲ မှာထဲ့မမေးဘူးလို့ လဲ ကလေးတွေကိုကြေညာထားလိုက် သေးသတဲ့ ..။သူ လည်း သူတတ်နိုင်သလောက်
လုပ်တာနေမှာ ပေါ့ လေ..။
တကယ်တော့..ဒီလို .နုနယ်တဲ့ ကလေးတွေအတွက် အတွေးအခေါ် အဆိပ်အတောက်
ဖြစ်စေမယ့်သင်ခန်းစာမျိုးတွေကို သင်ရိုးထဲမှာ ပြဌာန်းထားတာကိုက သင့် တော်တယ် မထင်ပါဘူး..။
မိတ်ဆွေတို့ ကော ဘယ်လို ထင်ကြပါသလဲ..။
ကျမကတော့ ငါးတန်းကျောင်းသူ တူမလေးရဲ့ချက်ကြလက်ကြ ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကိုပဲ ကြားယောင်နေပါတယ်..။
“ သမီးလဲ..ဒီစာကြီးကို သင်ရတာမကြိုက်ပါဘူး..။ပညာလိုချင်လို့ရူးချင်ယောင် သွပ်ချင်ယောင်ဆောင်ရင်
အရူးပညာပဲ ရမှာပေါ့ နော်.”.တဲ့။ ။
Posted by နီဇူလိုင် at 7:30 AM